Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa amaantay talaabooyinka ay qaaday Dowlada Somalia… – Hagaag.com
Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa amaantay talaabooyinka ay qaaday Dowlada Somalia…
War qoraal ah oo ay soo saartay Hay’adda Lacagta Aduunka ee IMF ayaa lagu sheegay in wadahalo dhanka internaka ee muqaalka ay wada yeesheen mas’uuliyin ka socsotay IMF iyo Dowladda Soomaaliya, dib u eegis lagu sameeyey heerarka dib u habeynyta maaliyada iyo fulinta waxyaaba lagu heshiiyey, si Soomaaliya looga cafiyo deynta iyadoo la marayo barmaanija ECF ay taageerada gaarka lagu siiyo dalalka caqabadaha kala kulma bixinta deymaha.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay saameyn iyo caqabado badan kala kulantay kala bar sanadka 2020, dhibaatooyin badan oo ay kujiraan daadad, Ayax wayeelo u geystay dhulbeered farabadan iyo cudurka Covid 19, oo hoos u dhigay awoodda dowladda ee dakhliga gudaha.
Hay’adda Lacagta Aduunku IMF waxa ay amaantay talaabooyinka ay qaaday Dowladda Soomaaliya, si ay hoos ugu dhigto saameynta dadka iyo dhaqaalaha ay ku yeesheen dhibaatooyinkaas iyadoo ka faa’iideysatay taageerada beesha caalamka iyo hirgalinta mashaariicda ay kujiraan Baxnaano oo Gargaara dadka nugul iyo kobcinta dhaqaalaha.
IMF waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ku guuleytsay gaarista dhamaanba talaaboyinka looga baahnaa dib u eegista kowaad ee dhaqangalinta Barmaaijak ECF ee ujeedkiisu tahay siinta caawinaad dhaqaale dalalka dhibaatad kala kulma bixinta deymaha sidoo kale Hay’adda Lacagta Aduunku waxa ay soo dhaweeysay go’aankii golaha wasiirada Soomaaliya ay ku meelmariyeen dhismaha guddiga ladagaalanka musuq maasuqa.
Dhinaca kalana Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr C/raxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlay warka kasoo baxay Hay’addaLlacagta Aduunka ee IMF ee ku aadan in Soomaaliya sanadka 2020 hirgalisay shuruudah sanadlaha ee laga rabay, wuxuu xusay sida ay uga go’antahay xoojinta iyo wada shaqeynta hay’adaha IMF, Bangiga aduunka iyo cidkasta oo deyn ku leh inay ka codsadaan sidii ay Soomaaliya uga cafin lahaayeen deymahooda, si Somalia u gaarto isku filanaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa Dadaal ugu jirto sidii dalkeeda looga cafin lahaa deymaha faraha badan ee lagu leeyahay oo qaarkood sanadkii tagay laga cafiyey.